Mogadishu Journal » Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo gaaray magaalada Buulo-Burde
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo gaaray magaalada Buulo-Burde
Mjournal :-Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Odawaa Yuusuf Raage ayaa gaaray magaalada Magaalada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan.
fdiga Abaandulaha ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ku sugnaayeen magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,iyaga oo kulamo la soo qaatay saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka iyo Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Booqashada abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Odawaa Yuusuf Raage iyo saraakiisha la socota ayaa salka ku haysa diiwaangelinta ciidamada xoogga dalka iyagoo hore u soo booqday magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka mid ah maamul goboleedka Hirshabelle.
Degmada Buulo-Burde waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go’doomiyeen Al-Shabaab,waxaana saraakiisha Ciidamada ay dhowr mar sheegeen inay go’doonka ka qaadi doonaan.
Beesha caalamka oo cadaadis ku saartay Muuse Biixi in uu bedelo go’aan uu hore u gaaray